लामो पुलमा मेला लागेछ… ! (फोटो फिचर) - Jananigrani News
लामो पुलमा मेला लागेछ… ! (फोटो फिचर)
प्रकाशित मितिः ३० श्रावण २०७७, शुक्रबार १५:३३
यो तस्विर आज (शुक्रबार)दिउँसो ४ बजेर ३० मिनेटमा बाङ्गेचौरमा रहेको सहिद पार्कको आडको खिचिएको हो । उक्त स्थानमा निर्माण गरिएको बागलुङको बागलुङ नगरपालिका–१ बाङ्गेचौर र पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ पाङ्गको अदुवाबारी जोड्ने नेपालकै लामो ५६७ मिटरको झोलुङ्गे पुल आजदेखि सर्वसाधारणको लागि खुल्ला गरिएको छ । यो तस्विर त्यहि पुल चढ्नको लागि भेला भएका नागरिकहरुको हो ।
पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेको निर्माण कम्पनीले जनाएपनि हस्तान्तरण नै नगरेको स्थितिमा बागलुङ नगरपालिकाले आजदेखि सर्वसाधरणको लागि आवतजावत संचालन गरेको थियो । बागलुङ नगरपालिकाले बिहीबार राती शुक्रबारदेखि पुल खुल्ला गरिएको जानकारी गराएको समाचार संचार माध्यममा आएपछि विहानैदेखि पुलमा भिड लागेको थियो ।
देशमा कोरोनाको महामारीको जोखिम अझै बढिरहेको छ तर बागलुङको पुलमा आज देखिएको भिड हेर्दा बागलुङका जनतामा कोरोनाको कुनै पिर र चिन्ता छैन । पुलको सुरुवातमा को पहिले चढ्ने भन्ने तछाडमछाड देखि रहँदा विचसम्म पुग्दा भने सवैको सातो गएको (डर) प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो ।
निर्माण कम्पनीले सम्पन्न भएको जानकारी गराएको भरमा हस्तान्तरण नै नभएको र उद्घाटन समेत हुन बाँकी रहेको पुल नगरपालिकाले आजदेखि संचालन गर्दा पुल हेर्ना गएका धेरैले अत्याधिक जोखिम रहेको बताएका छन् । नेपालकै लामो रहेको पुल सिंगल स्पानमा निर्माण गरिएको छ । पुलमा आज पहिलो दिन सर्वसाधरणको भिडले अत्याधिक हल्लिएको भनेपनि पुलको क्षमता ८५ टन र ६ सय १२ जनाको रहेकाले पुलको राम्रोसँग परीक्षण नगरि संचालन गरिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
पुलमा भिड बढेपछि प्रहरीहरु परिचालन गरिएपनि त्यहाँको भिडलाई उनीहरुले रोकन सकेको देखिएन् । कोरोना न्यूनिकरणको लागि काम गर्नुपर्ने स्थानिय तहको काम रहेको बेला भिड जम्मा गर्ने निर्णय गर्नु नगरपालिकाको अप्रिय र कच्चा निर्णय हो । त्यसलाई अप्रिय घटना घट्नु अगाडी नै नगरपालिकाले बेलैमा सच्चाउनुपर्ने देखिन्छ ।
बागलुङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले प्राविधिकको सल्लाहमा पुल संचालन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले आज भिड देखिएकोले जरुरी काम बाहेकका अन्यलाई रोक्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो ।